Guinea : Ny Adin’i Nadine Bari Ho Fampihenana Ny Fahantrana ao Guinea · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Septambra 2011 6:57 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, عربي, русский, Italiano, 繁體中文, 简体中文, македонски, Français
Nadine Bari tao anatin'ilay fanadihadiana
Nadine Bari dia Frantsay monina ao Guinea ao Andrefan'i Afrika amin'ny ampaham-potoany ary ny ampahany any amin'ny nosy Frantsay ao amin'ny Oseana Indiana La Réunion.
Ramatoa kely Bari dia namoy ny vadiny Abdoulaye “Djibril”Barry nandritra ny iray tamin'ireo famoretana an-kerisetra tao Guinea izay efa fahazarana teo ambany jadon'i Sékou Touré. Dimy amby roampolo taona lasa izay, nanangana fikambanana iray tsy miankina amin'ny fanjakana izy izay manohana ny vehivavy, ny manan-kilema, ary ireo mponina avy any ambanivohitr'i Guinea
Global Voices (GV) : Ahoana no nahatongavanao tany Guinea Guinea?
Nadine Bari (NB): Ny Janoary 1964 no nahatongavako voalohany tao Guinea hanaraka ny vadiko izay Guineana. Izahay roa dia natahotra ihany ny amin'ny fahafahanay hametraka ny fahaizanay sy ny tanjaky ny fahatanoranay hiasa ho amin'ny fampandrosoana ilay firenena vao avy nahaleotena (tsy ho an'ny fitondrana tamin'izany kosa anefa). Tsy hita ny vadiko ny taona 1971. Ny boky nosoratako voalohany, “Grain de sable” na “Voam-pasika” izay momba ny fikatsahana nataoko hitadiavana ny marina mikasika ny nahafatesany (ilay fanadihadihana “Mbola niandry anao aho omaly” notarihan'i Catherine Veaux-Logeat koa dia namaritra io fikatsahana io)
GV: Resaho anay ny momba ny Fikambananao?
NB: Antsoina hoe Guinée-Solidarité (GS) . na Firaisankinan'i Guinée ilay izy. Nitsangana tao Strasbourg, Frantsa ny taona 1987. Nandritra ny fitsidihana roa nataoko tao Guinea ny taona 1985 sy ny 1986, dia tsy afaka nanampy aho fa nanara-maso ny faharavàna ara-toekarena sy ara-tsosialin'ny firenena. Ohatra, tao Koundara-Youkounkoun, dia gaga aho raha nahita ny sekolin'i Ouros tsy nisy latabatra ho an'ireo mpianatra. Voatery mitondra ny sezany avy izy ireo raha tsy izany dia tsy mahazo mianatra. Ao anaty efitrano fianarana iray, dia andrin-jiro iray nianjera no ataon'ilay mpampianatra ho latabatra ho an'ny ankizy. Zara raha manana tahirim-panafody ny ao amin'ny tobim-pahasalamana, ny sasany aza efa lany daty. Niaraka tamin'ilay sary nalain'ny zanako vavy, dia nanaitra ny fahatongavan-tsain'ny fiangonanay tao Strasbourg izahay. Mpiasa taminà orinasa mpanondrana entana ny iray tamin'ireo mpikambana tao amin'ny antoko mpihira, izy no nanome Kaontenera vitsivitsy niaraka tamin'ireo entana voaangonay avy any amin'ny hopitaly, sekoly ary orinasa maro tao Alsace ary nandefa ireo tany Guinea. Izay no nanombohan'ny zavatra rehetra.
GV: Ahoana no nanampian'ny Guinée-Solidarité (GS) na Firaisankinan'i Guinée ho fampihenana ny fiantraikan'ny fahantrana tao Guinea?
NB: Ny kendrenay dia ireo tanàna izay toa adinon'ireo mpanome fanampiana iraisam-pirenena. Ireo izay saro-dalana ary indrindra fa ireo izay atao ankila-bao, any amin'ny àlan'i Guinea sy any Avaratr'i Guinea. Ny taona 1986-87, tohina izahay tamin'ny fahitana ireo marary any amin'ny hopitaly ao amin'ny tanànan'i Mali (ao amin'ny faritr'i Fouta-Djallon ) mandry amin'ny tany. Nanaitra ny sain'ny tao Alsace sy ireo faritra manodidina indray izahay mba hanangona fitaovana ara-pitsaboana. Raha atontaly, hopitalim-panjakana 7, toeram-pitsaboina 12 ary vondrom-pitsaboina 18 no nahazo tombotsoa tamin'ilay hetsika. Isan'ny laharam-pahamehana aminay ny fanampiana ireo manan-kilema (na ireo sembana ara-batana, jamba na ireo atosiky ny fiarahamonina). Ampianarinay ny sasany amin'izy ireo hampiasa ny kodiarana roa sy ny kodiarana telo.
Toerana fanamboarana akanjo naorin'ny fikambanana Guinée-Solidarité na Firaisankinan'i Guinée (sary nampiasaina nahazoana alàlana)
GV: Inona no zavatra tena miavaka nataonan'i Guinée-Solidarité ho an'ny vehivavy?
NB: Nanampy nanangana trano fanamboarana akanjo izahay hahafahan'ireo vehivavy mandoko ‘indigo’ ny akora. Manampy ireo mananontena miasa manao zaridaina ao amin'ny Fello Wendou tao amin'ny faritr'i Fouta-Djalon koa izahay. Afaka nahazo fanampiana ara-bola avy tany Soisa koa izahay mba ho enti-mamboly hazo hakàna indigo. Nanomboka ny taona 2007 ilay tetikasa ary mifototra amin'ny fahaizan'ireo vehivavy ao Fulani sy ny fomba handrariany ireo akora nentim-paharazana. Indrisy anefa, nanatsofohan'ny orinasa mpanao lamba sinoa ny akanjo vita sinoa eny tsena, amin'ny vidiny faran'izay ambany dia ambany tsy ahafahantsika mifaninana akory raha te hitazona ny asantsika isika
Trano famakiam-boky ho an'ireo vehivavy Guineana tarihan'ny Guinée Solidarité na Firaisankinan'i Guinée (sary nampiasaina nahazoana alàlana)
GV: Fanabeazana ireo mahantra sy ireo zaza manan-kilema no isan'ny fahombiazanareo misongadina. Ahoana no fomba ataonareo ao amin'ny tetikasa ?
NB: Ao amin'ny La Cité de Solidarité (tanànan'ny firaisankina), mpiray vodirindrina amin'i Conakry [renivohitra] faritra fantatra loatra amin'ny fisianà olona tsy manan-kilofana sy mpangataka, fantatray fa olona 450 no sembana. Tsy misy mahay mamaky teny na iray aza. Hitanay fa 80 amin'izy ireo, dia zaza amam-behivavy avokoa, Tohanan'ny avy any Frantsa, Espana, Alemana. Ny antony iray ahafahana mahazo fanampiana dia na ilay zaza kamboty na manan-kilema. Betsaka ireo zaza mpangataka – na ilay jamba aza – afaka nandia sekoly, tao Gamal Abdel Nasser na ny Oniversiten'i Sonfonia ao Conakry.Trano famakiam-boky iray no mivoaha ho an'ny zaza ao amin'ny “La Cité” sy ny mpiray vodirindrina aminy Joany paoly II. Tena nankasitrahana ilay izy. Nametraka fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro mihitsy aza izahay hamatsiana herinaratra mba ho an'ny filàna isan'andro.
Guinée-Solidarité dia nanana rantsana 4 : Strasbourg, Marseille (izay namatsy vola tamin'ny ampahany be tamin'ireo fananganana akany fanarenana ho an'ireo manan-kilema tao Mamou), Paris ary Conakry